Ogaden News Agency (ONA) – Kulanka Ururka Midowga Afrika & Burundi.
Kulanka Ururka Midowga Afrika & Burundi.
Posted by Daljir	/ February 1, 2016
Masuul u hadlay Ururka Midowga Afrika (AU) ayaa sheegaya in ciidamo Nabad Ilaalin ah aysan u diridoonin dalka Burundi ilaa inta dowladda ay badelayso mowqifkeeda ooy ogolaanayso in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo dalka Bururndi.
Ergeyga Gaarka ah ee AU ee gobolka Harooyinka Waaweyn, Ibrahima Fall ayaa sheegay in aysan marnaba qorshaha ugu jirin Ururka AU inay ciidamo Nabad Ilaalin ah gayso dalkaasi dowladda oo ogolaate mooyeene.
Kulanka madaxda Ururka AU ayaa looga baaraandegayaa in ciidamo nabad ilaalin ah oo gaadhaya 5 kun oo askari in loo diro dalka Burundi si la isugu dayo in lajoojiyo rabashadaha dalkaasi ka socodo mudo bilo ah. Madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza ayaa sheegaya inuu arkayo colaad haddii ay ciidamo kasocda Ururka AU soo farogaliyaan dalkiisa.
Go’aanka Mr. Nkurunziza uu sanadkii hore ku gaadhay inuu xili seddexaad u tartamo jagada madaxtinimada ayaa kiciyay rabshadaha hadda jira kuwaasoo lagu dilay in kabadan boqolaal qof oo rayid ah.